Sweden oo raacday wadadii Norwey iyo Denmark, isbadal weyna ku samaysay sharciga qoxootiga wadankaas - NorSom News
Sweden oo raacday wadadii Norwey iyo Denmark, isbadal weyna ku samaysay sharciga qoxootiga wadankaas
Baarlamaanka Sweden ayaa maalintii shalay ahayd cod aqlabiyad ah ku ansixiyay sharciga cusub ee qaxootiga, kaasoo si weyn wax uga badalaya qaabkii ay Sweden ku qaabili jirtay dadka magangalyo doonka ah. . Sharciga cusub ayaa waxaa u codeeyay xildhibaanada xisbiyada Socialdemokraterna (S), Moderaterna (M), Sverigedemokraterna (SD). 240 xildhibaan ayaa ku codeysay Haa, 45 waa ka diiday, 30 waa ka aamustay iyo 34 ka maqnayd kala fadhiga
Isbedalada muhiimka ah ee saameenta ugu weyn yeelanaya waxaa kamid ah:
In sharciga ku meelgaarka ah qofka la siin doono muddo 13-bilood ah taasoo xaq u siinaysa qofka in uu cayr qaato ama uu helo adeegyada kale ee ay helaan dadka sharciga rasmiga ah haysta. Dadka loo aqoosato qaxootiga Geneva ayaa la siin doonaa 3-sano oo sharci ah. Marka uu sharcigu qofka ka dhaco ayaa loo cusbooneysiin doonaa haddii ay wali jidho sabab uu Sweden ku sii joogi karo. Haddii qofku isbiili karo ayaa sharci rasmi ah la siin doonaa.
Dadka da’doodu ka yartahay 25-sano ayaa sharci rasmi ah la siin doonaa haddii ay dhameeyaan dugsiga sare isla markaana ay is-biili karaan.
Waxaa kale oo loo suurto galin doonaa dadka Kharaabada lagu keenay iyo caruurta in mararka qaarkood la siiyo sharci rasmi ah, qaasatan caruurta caafimaadkoodu liito ayaa la siin doonaa sharci rasmi ah.
Dadka la siiyay magan-galyada (alternativt skyddsbehövande) ayaan xaq u yeelan doonin in qoyskooda lala mideeyo marka laga reebo kuwii is-dhiibay 24 November 2015 ka hor. Balse haddii ay dhacdo in diidmada mideynta qoyska ay ka soo horjeedo sharciga Sweden ayaa qofkaas qoyskiisa lala mideyn doona.
Dadka loo aqoonsaday qaxootiga Geneva ayaa lala mideyn doonaa qoyskooda.
Qofka doonaya in lala mideeyo qoyskiisa ayaa shuruud ah in uu isagu is-biili karo isla markaana uu biili karo dadka imaanaya (balse shuruudaan waxaa ka reeban dadka qaxootiga iyo magan-galyada la siiyay iyo caruurta waalidkood lala mideynayo balse waa haddii uu qofkaasi codsiga mideynta sameeyay 3-bilood gudaheed markii isaga sharciga la siiyay).
Nidaamkii loo yaqaanay (Övriga skyddsbehövande) oo ah dad kale oo magan-galyo u baahan ayaa meesha laga saari doonaa guud ahaan. Nidaamkaan ayaa Soomaali badan sharci ku qaadan jidhay. Sidoo kale dadkii loo aqoonsaday in ay haysato dhibaato qaas ah (synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter) ayaan iyagana sharciga la siin doonin, haddii aysan taasi ka hor-imaanayn qawaaniinta Sweden.
Guud ahaan sharcigaan cusub ayaa si weyn u adkeynaya wadooyinka ay qaxootigu sharci uga heli karaan Sweden, isagoo qaasatan si weyn u saameynaya Soomaalida, kuwa hadda iska dhiibaya wadanka iyo kuwa doonaya in lala mideeyo qoyskooda.
Sharciga cusub ayaa shaqeeyn doona muddo 3-sano ah, isagoo dhaqan-gali doonaa bisha July 20, 2016.
Sweden oo ahayd meesha ugu badan ee dadka magangalyo doonka ah iska dhiibi jireen wadamada scandinavianka ayaa hada u muuqato inay kusoo biirtay wadamada ku yaalo woqooyiga yurub ee adkeenaya sharciga qoxootiga si aan qoxooti badan u imaan wadankooda. Denmark iyo wadankan Norwey ayaa ayagu horey u meelmariyay sharciyo adkeynaya xeerka qoxootiga wadanka, taas oo keentay in dib u dhac weyn uu ku yimaado tirada dadka qoxooti ahaanta isaga dhiibi jirey wadamadaas.
Xigasho: Somaliska.com og Nettavisen.no
Previous article40 sano kadib ayay Farxiyo aabaheed oo soomaali ah kula midowdey Oslo.
Next articleUDI-da oo lagu eedaynayo gacan culays ku aadan kasoo jawaabista codsiyada dadka qoys ahaan loogu dacwooday